Regedza Kuparidzira Social Networks Kumabhizinesi | Martech Zone
Chipiri, February 3, 2009 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Kune vanhu vakati wandei vandinoremekedza mudunhu nemunyika muSocial Media spotlight - asi ndinotenda zvechokwadi kuti vari kuendesa mamwe mabhizinesi munzira isiriyo nekuvayambira kuti vadyara mari chete pasocial network.
Sezvo imi vanhu muchiziva, ini ndiri kushingairira mhiri kwetoni yemasocial network, enhau enhau mawebhusaiti uye zvemagariro zvinoshandiswa. Ndine zvakanyatsoteera zvinotevera pamambure andiri. Mubvunzo ndewekuti blog yangu yaita zvakadii ndatenda kune avo masocial network. Mushure mezvose, idzi ndidzo shamwari dzinovimbwa kwazvo - network yangu! Ivo vanofanirwa kuenzanisira huwandu hukuru hwemotokari, handiti?
Ngatitarisei kune vekupedzisira 143,579 vakatumira vashanyi kublog rangu
Google: 117,607 yakasarudzika vashanyi
StumbleUpon: 16,840 XNUMX yakasarudzika vashanyi
Yahoo!: 4,236 XNUMX yakasarudzika vashanyi
Twitter: 2,229 yakasarudzika vashanyi
Rarama: 605 yakasarudzika vashanyi
MSN: 559 yakasarudzika vashanyi
Bvunza: 476 vashanyi vakasarudzika
AOL: 446 yakasarudzika vashanyi
Facebook: 275 vashanyi vakasarudzika
LinkedIn: 93 vashanyi vakasarudzika
Baidu: 79 vashanyi vakasarudzika
Altavista: 54 vashanyi vakasarudzika
Plaxo: 41 vashanyi vakasarudzika
Netscape: 39 vashanyi vakasarudzika
Dai ndaizoteerera kune ese Smippies, Ndaipedza zuva rese ndichivandudza Facebook uye LinkedIn kuedza kuita mari. Ini handidaro.
Ini ndinogadzira zvinyorwa uye zvigadziriso kune ayo masocial network, asi ini handipedze nguva kuvashanda. Pane zvikonzero zvinoverengeka:
Vari kare network yangu yakavimbika. Ini handidi kusunda kana kutengesa kwavari - ivo vatovepo kwandiri.
zvavo chinangwa chekubatana neni kuburikidza neaya masocial masvikiro hakusi kutenga kubva kwandiri, uye havatarisiri kuti ndivatengese. Mune mamwe mazwi, ini handisi kuzoshandisa zvisina kufanira hukama hwandinazvo nevanhu ava.
Ini ndicharamba ndichiedza kuvaka hukama hutsva pazvinonzwisisika - kuburikidza nemajini ekutsvaga. Ndinoziva kuti kune vanhu vari kutsvaga mhinduro dzandinopa mune ino blog saka ndiri kuenda kutarisisa kukura kwangu kutevera nekupindura iyo mibvunzo. Yakavakirwa-mvumo, iri Huge (tichienzanisa ne 0.2% traffic kubva kunetiweki yangu), uye yavo chinangwa kutarisa mhinduro dzandiri kupa.
Izvi zvinoreva here kuti iwe ita zvandinoita?
AIHWA! Ini handisi kukuraira iwe kuti urege hanya nemasocial network kana vanhu vanokumanikidza kuti uashandise. Zvandiri kuraira ndezvekuti iwe unoyera mhedzisiro yekuedza kwako uye gadzirisa marongero ako nenzira. Akawanda maSmippies ari kunze uko achiparidzira mabhenefiti eSocial Networks pasina hunyanzvi hwekukubatsira kuyera mhedzisiro uye nekuisa marongero ako nenzira kwayo.
Edza vanachipangamazano kuti varatidze mabhenefiti emari! Ndakaudza dzimwe nyanzvi dzisingabatsiri pa Hutungamiriri Ventures nhasi chokwadi - sebhizinesi, ini ndinoyera kubatanidzwa nezviratidzo zvemadhora. Kana ndiri kushambadza mushe, ndiri kuwedzera yangu yekutengesa kuwana madhora, kuwedzera yangu upsell madhora, uye kuchengetedza yangu ekuchengetedza madhora.
Tags: bhizinesi munharaundayemagariro venhauevanhu vezvenhauSocial Media Marketingpasocial media kushambadzira kwebhizinesimagariro enhau anotumirwa
Ini ndinofunga iwe une hombe poindi ipapo, wakapihwa gungwa renyanza pakati peinjini dzekutsvaga nedzimwe. Nekudaro zvinogona kuve zvinonakidza kana munhu akawana mukana wekushandura chikamu chega chega futi, kungo tarisa kune vashanyi vanongokurumidza kuita veimwe nhepfenyuro.
Kukadzi 4, 2009 na12: 49 PM
Ndizvozvo! Nekudaro kurudziro yekuyera zvakaringana - uye kuyera mu $. Ndatenda goacom!
Kukadzi 4, 2009 na6: 41 PM
AMEN !! Ini ndinobvumirana zvachose. Kunyangwe usiri kutora chero chinhu kubva pasocial media, iwe unofanirwa kuve nekunzwisisa kwekunge traffic yako ichibva kwazviri! Kunyangwe paunowana traffic kubva kune mamwe masocial media masaiti (kureva Stumbleupon), UNOFANIRA kuyera KUKOSHA uye CHINANGWA chevashanyi ivavo.
Kunyangwe… ini ndaizoisawo mablog mumutambo mumwe chete…
Kukadzi 4, 2009 na11: 28 PM
Ndinobvumirana newe 100%! Kubloga kunosanganisirwa uye UNOFANIRA kuve nekudzoka kune investment kana ichizoshandiswa senzira inonzwisisika yekugadzira shanduko. Akawanda maSmippies ari kunze uko anotengesa mabloggi seGirafu Dzvene, asi asiri kudzidzisa makambani maitiro ekuronga kuendesa blog uye kuyera mhedzisiro.
Kutsvaga kwakakura zvakadaro svikiro nekuti chinangwa chakanyorwa zvakananga mune iyo diki "yekutsvaga bhokisi" - ingave iri PPC kana organic!
Kukadzi 6, 2009 na1: 05 PM
Kunyangwe mukati memagariro masosi unogona kuita izvi. Isu tanga tichitumira nhau uye info kune akati wandei masaiti uye twitter iri kutiunzira yakanakisa mhando traffic. Yechipiri muhuwandu hwehuwandu, asi nguva yakashandiswa uye mapeji anoonekwa ari kure uye ari kure zvakanyanya.
Saka mukati meiyo subset, isu tiri kutarisisa kuona chokwadi twitter chikamu chedu kusvika.
Kukadzi 6, 2009 na9: 04 PM
Kuda kuziva, Twitter iri kuunza yako saiti yakawanda traffic kupfuura Kutsvaga? Kana zvirizvo, izvo zvinogona kunge zvakavhundutsa! Kana zvinogona kureva kuti inguva yekuti iwe uwane rubatsiro rweSEO kana kutanga bhizinesi blog!
Kukadzi 6, 2009 na3: 43 PM
Ndiri muPR uye isu tiri kunyatso kuita yakawanda SM kuraira / kuparidza mazuva ano. Asi ini ndinogara ndakangwarira kuyeuchidza vatengi kuti izvi zvitsva zvirongwa zvinofanirwa kuve chikamu chemhinduro yakazara yakabatana. Vazhinji vevatengi vedu vanongoda rubatsiro kutara mamiriro edhijitari uye kududzira zvakanaka zvemukati pasocial network. Asi pakupedzisira inofanirwa kudzoka kumadhora uye ichiratidza kukosha. Uye iwe unosimbisa pfungwa yakakosha yekuti Google "yako peji rekutanga" uye unofanirwa kutarisira iyo sosi kutanga uye kunyanya. Ndatenda. (ps ini ndakabatana-mukati kuburikidza neTwitter, heh)
Kukadzi 6, 2009 na9: 08 PM
Izvo zvinotyisa! Ndinofara kukuona pano kuburikidza neTwitter - ndinokwira kusvika ku8% yemotokari yangu pamazuva kubva kuTwitter saka ndinoikoshesa. Ini ndinongowana 50% + kubva kuKutsvaga saka ini ndinobhadhara zvishoma kutarisisa ipapo! Autom Ini ndinogadzira yangu feed kune Twitter kubva Twitterfeed kuitira kuti zvirege kushanda nesimba!
Yakakura posvo Doug. Iwe unorova pa (mune edu maonero) iyo inonyanya kunetseka nzvimbo yekushambadzira - MEASUREMENT. Vanhu vazhinji nemabhizinesi vanokundikana mune zvake uye havaite sarudzo dzakadzidziswa kana kugadzirisa kune yavo yekushambadzira chirongwa / zviitiko. Usandiratidze zvisiri izvo, pasocial media chinhu chikuru chekutaurirana, asi iwe unofanirwa kuongorora zvakaringana kuyedza kwakadii kudyara mairi maringe nemamwe masvikiro.